Maxay dhacdaa riyootaa?
Sida nolosha dhabta ah, dhaca ah ee riyo waa wax xun. Si aad u ogaato macluumaadka saxda ah ee aad u baahan tahay inaad tixgeliso faahfaahin kale, tusaale ahaan, nooca dembiga la galay, iyo doorka aad ka ciyaaray.
Aragtida noocan oo kale ah waxay calaamad u tahay xaqiiqda ah in xalinta dhibaatooyinka kala duwan ee aad si joogto ah ugu tiirsan tahay ra'yiga dadka kale. Dadka ku dhex jira xiriirka, dhaca ah ee riyadu waxay ku riyoon karaan isku dhacii lammaane iyo wax walbana waxay u horseedi karaan in ay qayb galaan . Haddii aad si aamusan ugu dhufatey waddada, markaa waxaad filan kartaa inaad sii wadato saldhigga xirfadda.
Maxay tuugadu guriga ku riyootaa?
Riyadan oo kale waa calaamad muujinaysa is-shaki qabasho sababo kala duwan awgood. Tani waxay sidoo kale noqon kartaa calaamad muujinaysa inaadan dareemeyn amaan ka hor dunidii kugu wareegsanaa. Tarjumaadda riyadu waxay ku talineysaa in ay noqoto mid furan oo markaa dhammaan dhibaatooyinka ayaa dhammaan doona.
Waa maxay sababta bangiga riyadu ku riyootay?
Si aad uga qayb qaadato bangiga oo macnaheedu yahay inaad sugaysay mahadsanidii loogu talagalay taageerada la bixiyey muddo dheer, laakiin dadku ma rabaan inay sameeyaan. Xitaa riyoodaan oo kale ayaa saadaalin kara soo-saarka fadeexadaha leh mas'uuliyiinta, iyo sidoo kale samaynta iibka firiiricda.
Qofka dhalinyarada ah sida riyadu wuxuu noqon karaa boob-ka-soo-bax ah oo soo noqnoqonaya dad badan oo jecel, kuwaas oo ka mid ah si buuxda loo xaqiijiyo ragga. Haddii aad aragto dhac dhac ah ee gurigaaga, markaa waa inaad fileysaa inaad qaboojiso xiriirka lala leeyahay qaraabada dhow.
Maxay tuugada tuugadu u egtahay?
Riyadan oo kale waa calaamad ku saabsan nolol wanaaga iyo barwaaqo, waxaad si dhakhso ah u filan kartaa in xaalad dhaqaale lagu hagaajiyo. Dreambook wuxuu kugula talinayaa in dadka riyadaas arkay inay ahaadaan kuwo taxaddar leh oo si taxadar leh uga fekeraan erey kasta iyo ficil kasta.
Waa maxay sababta riyada aruurinta?
Maxaa riyadu ku riyootaa?
Muxuu laftu u eg yahay?
Maxaad ku riyootaa ducklings yar yar?
Turjumaanka riyadu waa cunug iyo sida loo turjumo riyooyinkan?
Maxaad u dabaalanaysaa bisha August?
Muxuu dabka ku riyoodaa?
Habeenka Easter - calaamadaha
Maxaad u cuni weydaan tufaax ka hor inta uusan Badbaadiyaha Apple?
Calaamadaha bisha Oktoobar ku saabsan cimilada
Waa maxay sababta aad u jeceshahay inaad guri iibsato?
Duufaantii Bishii Abriil - Calaamadaha Dadka
Toddobaadka Pancake: calaamadaha iyo caadooyinka
Waa maxay sababta xajmiga loo yaqaan 'headscarf'?
24 sheeko macquul ah oo farshaxanka khaaska ah
Goosebumps waxay keentaa
Ultrasound ee beerka - diyaarinta
Qoyaanka beerka lo'da
Calcium gluconate oo guduud leh
Tylosin ee bisadaha
Tretyakov Gallery - rinjiyeynta
Saxarada cad - calaamad u ah cunugga?
Astaamaha xanuunka mastitis ee hooyada kalkaalinta
Waxyaabaha loo yaqaan GMO Products
Daryeelka maqaarka qalalan
Samee casiir - guryaha dawooyinka iyo calaamadaha loo isticmaalo
Dharka quruxda badan 2013
Alaabada gudaha ee guriga
Jam oo ka soo baxa tufaaxa shaah ah
Iskuduwaha kudhexeeya labada dhinac
Riddles for kids 5 sano jir
Qurxinta caag xumbo
Sidee loo noqdaa xoriyad?